Amasebe emilambo njengemathiriyeli yale mizobo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Le mifanekiso eqingqiweyo eyenziwe ngeentonga zomngcunube
Asikhe siyeke ukumangaliswa zezinye zezinto zokudalwa kwaba bazobi. Ngeli xesha engumzobi othatha uninzi lwamasebe omngcunube ukuzenza zibe yimifanekiso eqingqiweyo elunge ngokugqibeleleyo kulo naliphi na ihlathi.
Lo Umkroli wase-Bhritane ogama linguAnna kunye neWillow, Usibonisa ukuba yintoni eyimpembelelo yakhe ekwenzeni imifanekiso eqingqiweyo ephefumlelweyo yindalo ngokwayo. Uhlobo olubonelela ngezinto ezifanayo njengeentonga zomngcunube.
UAnna waqala ukusebenza ngale nto 10 kwiminyaka eyadlulayo xa ethatha ikhosi yemifanekiso eqingqiweyo. Ngokusebenza ngezinto zendalo, wavula ingqondo yakhe kwihlabathi elitsha, ke waqala ukufunda ngeendlela ezahlukeneyo zebhasikithi; Apha, i-wicker iyasebenza kakhulu kwiindawo ezininzi zaseSpain.
Wayekuvuyela kakhulu ukufunda ezo ke izakhono zemveli ukuba akwazi ukongeza twist yakhe kwinkqubo yokufunda. Abaphathi beli chule bayakwazi ukwenza iintlobo ngeentlobo zeebhasikithi kunye nezipho ezincinci, kodwa eli gcisa liyakwazi ukwenza imifanekiso eqingqiweyo emikhulu lisebenzisa obu buchule bendabuko.
Inkqubo yakho yomsebenzi iyenzeka ngemizobo emininzi ngaphambi kokuqala ukwenza umfanekiso oqingqiweyo kunye namathambo esakhelo sesinyithi. Kuxa u-Anna eqala ukudibanisa intonga yemijelo emininzi ukwenza ezo mifanekiso mihle kwaye ibalulekileyo onokuyifumana kwiifoto esabelana ngazo.
Abanye babo baphumelela 2 kunye nesiqingatha seemitha ukuphakama ukuma njengabalinganiswa abaphambili apho babekwe khona. Omnye wabo ngumfazi onesaphetha kunye notolo olunokubonakala ngokugqibeleleyo ehlathini ukudibana ngendlela enkulu.
Ungafumana Umsebenzi ka-Anna kwi-Instagram y landela kakuhle iinkqubo zakho zokuphefumlelwa kunye nokulawula oku kuluncedo kunye nezinto ezizodwa. Siyakushiya nezinye iintlobo zemifanekiso eqingqiweyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Le mifanekiso eqingqiweyo eyenziwe ngeentonga zomngcunube
Ngaphezulu kwe-18.00 izinto zekrisimesi zoyilo lwakho ze- $ 19 kuphela!